जीवन बुझाउने 'स्टेन' ! - Khelpati
जीवन बुझाउने 'स्टेन' !
मगलवार, श्रावण २८, २०७६ खेलपाटी संवाददाता
एजेन्सी । धैर्यताको खेलनै टेष्ट क्रिकेट हो, जसलाई 'जेन्टलमेन' खेल भनेर चनिन्छ । केही दिन अघि मात्र विश्वका उत्कृष्ट बलर मध्यका एक दक्षिण अफ्रिकी फास्ट बलर डेल स्टेनले टेष्ट क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा गरे ।
विश्व क्रिकेटमा कमै बलर होलान् जसको बलिङले ब्याट्सम्यानलाई पूर्ण रुपमा झस्काउने गर्दथ्यो । यसै मध्यका एक बलर थिए, स्टेन । ९३ खेलमा ४३९ विकेट लिएका स्टेनले ३६ बर्षको उमेरमा सन्यास लिए ।
औसतमा टेष्ट फास्ट बलरले ३३-३४ बर्षको उमेरमा सन्यास लिने गर्छन् ।
यही वाक्य केहि बर्ष अघि उनलाई अन्तराष्ट्रिय मिडियाले राख्दा 'बुलसीट’ भन्दै नकारेका थिए ।
‘मैले अस्ट्रेलियाका ब्रेट लीले ३८ बर्षको उमेरमा १ सय ४५ किमी प्रति घण्टाको गतिमा बलिङ गरेको देखेको छु ।’ स्टेनले भनेका थिए ।
स्टेनको यो भनाईबाट लागेको थियो उनी अझै लामो समय टेष्ट खेल्ने छन् । त्यसको ४ बर्षपछि उनले टेष्ट क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा गरेका छन् ।
उनले अझै केही बर्ष टेष्टमा रमाउने थिए होला तर उनले बलिङ गरेको केही समयमानै चोटको समस्याका कारण टेष्ट क्रिकेट छाड्न बाध्य भए । यद्दपी उनले छोटो फर्म्याटकाे खेलमा (एक दिवसीय र टी ट्वान्टी) भने उपलब्ध हुने छन् ।
१ सय ४५ किमी प्रति घण्टाको गतिमा बलिङ गर्नु निकै कठिन कुरा हो । तर, फिटनेस र कडा परिश्रममा खेलाडीले भौतिक शरिरलाई समेत जित्दै आएका छन् ।
'फास्ट बलर बन्नु तपाई पागल बन्नु जस्तै हो ।’ पाकिस्तानका पुर्व फास्ट बलर सोयब अख्तरले भनेका छन्, ‘उत्कृष्ट फास्ट बलरले सानो सफलताका लागि निरन्तर कडा मेहनत गर्नु पर्छ ।’
हाल दक्षिण अफ्रिकालाई स्टेनको भन्दा स्टेनलाई दक्षिण अफ्रिकाको आवश्यक रहेको अनुभब भएको छ । किनकी उसले स्टेनबिना पनि टेष्ट खेल जित्दै आएको छ ।
टेष्ट क्रिकेटको फास्ट बलरको रेकर्ड हेर्ने हो भने औसतमा हरेक ७० बलपछि १ विकेट हात पार्ने गरेका छन् । अझ टेष्ट क्रिकेटमा २ सय वा सो भन्दा बढि विकेट लिएका खेलाडीको औसत हेर्ने हो भने हरेक ७ ओभरपछि १ विकेट हात पार्ने गरेका छन् । जुन खेलाडीको लागि पिडादायी हो ।
यदी टेष्ट क्रिकेट एक जीवन हो भने स्टेनले यसमा पूर्ण समय बिताएका छन् ।
स्टेनको पालीमा दक्षिण अफ्रिकाले अस्ट्रेलिया, इंग्ल्याण्ड, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्युजिल्याण्डमा टेष्ट र अन्य सिरिज जितेको छ । स्टेनले भारतमा २ पटक टेष्ट जितेका छन् । यस्तै अन्य देशमा समेत उत्कृष्ट रहेका स्टेनलाई दक्षिण अफ्रिकामा त कसैले छुने आँट समेत गर्न सक्दैन थिए ।
स्टेनको खेल हेर्ने हो भने कुनै डरलाग्दो फिल्म हेरेको अनुभब हुन्छ । उनको तिब्र गतिको आउट स्विङ जसले लेग साइडमा पिच गर्दै उप–स्टम्पमा लाग्थ्यो, इन स्विङ बलमा अप्रत्यासिलो इन साइड एज, खतरनाक बाउन्सर र उनको त्यो आक्रामक सेलेब्रेसन, साच्चिकैको डर लाग्दो हुन्थ्यो ।
स्टेनले दक्षिण अफ्रिकाको सर्वाधिक सफल टेष्ट बलरको रुपमा टेष्ट जीवन अन्त्य गरेका छन् । सायदै हामीले उनको खेल जीवनमा विकेट बिना रहेको देख्न सक्छौं । उनले खेलेको खेल मध्य सन् २०१३-१४ को भारतविरुद्धको टेष्ट खेल रोमाञ्चक खेल मध्यको एक हो ।
स्टेनले सुरुवाती ६९ ओभर बलिङ गर्दा समेत कुनै विकेट हात पार्न सकेका थिएनन् । सायदै यो कुनै खेलमा यतिका ओभर बलिङ गर्दा समेत विकेट हात नपारेको ईतिहास भेटिन्छ । तर जब उनले बाँकी ओभरमा 'रिभर्स स्विङ' बलिङ गर्न थाले उनले १२ ओभरमा ६ विकेट हात पर्न सफल भए ।
कुनै पनि खेलाडीको लागि चोटनै सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो । र स्टेनको खेल जीवनमा यसले कहिल्यै उनलाई मुक्त हुन दिएन ।
स्टेनको गति थियो । उनी तेज थिए । उनी सम्भावना थिए । उनी चुनौती दिईरहेका थिए । उनी क्रिकेटका जिवन थिए ।
सन्दीपको टिम मेलबर्न पराजित
वेष्ट इण्डिजका स्मिथले भैरहवाबाट ईपीएल खेल्ने
सन्दीपको टिम मेलबर्नलाई १८७ रनको लक्ष्य
सन्दीप प्लेईङ सेटमा
सन्दीपको टिम मेलबर्न र ब्रिसबेन भिड्दै
व्रोड भिजन एकेडेमी र त्रिभुवन माविको जित
चेल्सी अघिल्लो चरणमा
टोटेनहमको निराशाजनक बराबरी
भ्यालेन्सियासंग बार्सिलोना स्तब्ध
उद्घाटनमा अमर ज्योती र मिरमिरे भिड्ने
ढुकु फुटसल र कुमारी फुटसलको जित